Cilmi Baadhis Cusub Ayaa Soo Jeedinaysa Terpenes Iyo CBD Work 2X Waxay Ugu Fiican Tahay Covid-19 Caabuq Ka Badan Corticosteroids • Dawooyinka Inc.eu
Dagaalka ka dhanka ah Covid-19, duufaanka cytokine waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu halista badan ee ay dhakhaatiirtu la dagaallamaan. Calaamaddan lagu garto xaaladaha daran ee coronavirus-ka cusub waxay u horseedi kartaa caabuq xad-dhaaf ah, barar, xanuun, iyo luminta shaqada xubinta jirka. Waxay xitaa sababi kartaa nidaamka difaaca jirka inuu aad u kaco oo dilo unugyada jirka - halkii aad kaliya la dagaalami lahayd infekshanka. Xaaladaha daran, waxay u horseedi kartaa dhimasho, sidaan ku aragnay xaalado badan oo daran oo ah Covid-19.
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, cilmi baadhayaashu waxay eegeen in cannabis, oo ay ku jirto walxo badan oo kiimiko ah, ay gacan ka geysan karto la dagaallanka saameyntaan dilaaga ah iyadoo la yareynayo bararka. Dhawaan waxaan leenahay natiijooyinka togan waxaa laga arkay daraasado muujinaya in CBD, walax ku jirta xashiishadda cannabis, waxay gacan ka geysan kartaa la dagaallanka duufaantan cytokine.
Natiijooyinka ugu horreeya ee daraasadda socota ee Israa’iil waxay hadda ku darsaneysaa sawirka cilmi-baarayaasha oo soo jeedinaya in maaddooyinka xashiishka ay noqon karaan daaweyn horusocod ah oo lagula dagaallamayo Covid-19. Laakiin daraasadani waxay leedahay terpenes, xeryahooda ku bixiya carafta iyo dhadhanka xashiishka iyo dhir kale oo badan waxay u horseedi karaan xitaa natiijooyin ka wanaagsan tan CBD oo keliya, waxaana laga yaabaa inay ka sarreeyaan daaweynta caadiga ah sida corticosteroids.
Warbixinnada daraasadda waxay muujinayaan in isku-darka CBD iyo terpenes uu saddex jeer ka waxtar badnaa ka hortagga waxqabadka cytokine marka loo eego dexamethasone, corticosteroid sahan dhowaan la sameeyay waxay cadeysay inay tahay daaweyn wax ku ool ah duufaanta cytokine Covid-19.
Daraasaddan cusub ee loo yaqaan terpene waxaa fulinaya laba shirkadood oo cilmi baaris iyo horumarin ah oo laga leeyahay Israel, Eybna, oo ku takhasustay dawooyinka terpene ku saleysan, iyo CannaSoul Analytics, oo ay hogaamiso Prof. David “Dedi” Meiri, PhD, cilmi baadhayaal caan ku ah cannabis iyo cilmiga bayoolajiga oo bartay cannabis si loogu isticmaalo xaalado ay ka mid yihiin kansarka iyo cudurka Alzheimers. Daraasaddan cusub waxaa loogu talagalay in lagu ogaado haddii anti-inflammatory terpenes ay gacan ka geysan karto yareynta duufaanka khatarta leh ee cytokine, iyo haddii ay sidaas tahay, sida ay u barbar dhigayaan daaweynta kale ee la heli karo.
Daraasadu waxay eegaysaa shaashadda terpene ee loo yaqaan 'NT-VRL ™', oo ay sameyso Eybna si loogu daaweeyo xaaladaha xanuunka sida cilladda duufaanka cytokine ee laga helo bukaanada Covid-19. Samaynta waxay ka kooban tahay 30 shaqsi oo terpenes ah kuwaas oo ah wakiilo ka hortaga bararka waxaana guud ahaan loo tixgeliyaa inay badbaado u tahay isticmaalka.
Saynis yahanka xogta Nadav Eyal, oo ah aasaasaha iyo agaasimaha guud ee shirkadda Eybna, ayaa sharxaya inay adeegsadeen "macdanta xogta bayoolajiga, ka baaraandegidda xogta iyo qaabeynta qaabeynta" si ay u abuuraan "sameysmo wax ku ool u bartilmaameedsanaya xaalado caafimaad oo gaar ah" sida duufaannada cytokine.
Wuxuu yidhi qaabkan horumarineed "wuxuu u furayaa adduunyo cusub qaabab dabiici ah oo wax ku ool ah - oo leh awood daaweyn taas oo shaqsiyaadka dawooyinka firfircoon ee firfircoon ay adagtahay in la iswaafajiyo."
Si kale haddii loo dhigo, in kasta oo daawooyinka badankood ay ku jiraan hal walxo firfircoon, qaabeyntaani waxay ka kooban tahay 30 maaddooyin oo kala duwan oo dhammaantood ka wada shaqeeya sidii loo abuuri lahaa saameyn faa'iido leh.
Duufaanta 'Cytokine Stay Assay'
Si loo tijaabiyo sameynta terpene, cilmi baarayaashu waxay isticmaaleen "Cytokine Storm Assay" oo ka socota Cannasoul, oo Dr. Meiri waxay sheegaysaa inay si fiican u dhisan tahay oo u oggolaanaysa "qiimaynta cudurka 'Cytokine Storm Syndrome'. Isticmaalka unugyada dhiigga aadanaha, baaritaanka wuxuu ka caawiyaa baarayaasha inay qiimeeyaan saameynta daaweynta kaladuwan ee dheecaanka cytokine - qodobka ugu weyn ee duufaanada cytokine ee xaaladaha daran ee Covid-19.
Iyadoo ay weheliso sameynta NT-VRL-terpene, cilmi baarayaashu waxay kaloo tijaabiyeen CBD, CBD oo leh NT-VRL ™ iyo Dexamethasone iyagoo adeegsanaya tijaabadan. Dexamethasone ayaa lagu soo daray maxaa yeelay waa corticosteroid badanaa loo isticmaalo in lagu yareeyo caabuqa. Daraasad dhowaan lagu sameeyay Boqortooyada Midowday, waxaa lagu ogaadey inay yareyneyso dhimashada seddex meelood meel meel isbitaalka la dhigo iyadoo la adeegsanayo Covid-19 iyadoo la adeegsanayo hawo-mareenka. The Ururka Caafimaadka Adduunka ayaa hadda cusbooneysiineysa talooyinkeeda iyadoo la adeegsanayo dexamethasone ama corticosteroids kale xaaladaha daran ee Covid-19.
Xarun kasta waxaa la tijaabiyey si loo arko sida ay u saameysey waxqabadka cytokine, natiijooyinkuna xoogaa naxdin leh. Kaliya maahan sameynta terpene inay awoodo inay joojiso waxqabadka cytokine (oo leh natiijooyin wanaagsan oo qiyaaso sare ah), laakiin sidoo kale waxay ka fiicneyd labadaba CBD iyo dexamethasone. CBD oo keliya ayaa celisay qiyaastii 75% ee cytokines celcelis ahaan, halka terpenes keligiis la joojiyay 80%, taas oo soo jeedinaysa in isku darka 'terpene' ee Eybna ay xitaa ka waxtar badan tahay CBD yareynta caabuqa.
Weli, natiijooyinka ugu fiican waxay ka yimaadeen isku dhafka CBD iyo sameynta NT-VRL ™ terpene, kaas oo awood u lahaa inuu xakameeyo 90% cytokines-ka la baaray. Marka la barbardhigo, dexamethasone wuxuu kaliya xakameyn karaa 30% ee cytokines, isagoo soo jeedinaya in isku darka CBD iyo terpenes ay 2 jeer ka waxtar badan yihiin daaweynta hadda lagu taliyay.
"Natiijooyinka hordhaca ah waxay ahaayeen kuwo aad u wanaagsan," ayuu yiri Eyal, isagoo intaa raaciyay inay "muujinayaan tallaabo muhiim ah oo ka-hortagga bararka ee terpenes waxayna jebinayaan aragtida ah in terpenes ay yihiin uun dhadhamin iyo udgoon ay leedahay saameyn placebo.
In kasta oo daraasaddan 'vitro study' ay bixinayso aragti muhiim ah oo ku saabsan suurtagalnimada isticmaalka terpenes iyo CBD ee la dagaallanka Covid-19, waxaa muhiim ah in la ogaado in natiijooyinkani ay ka yimaadeen daraasad socota oo aan weli la dhammaystirin asxaabta. dib loo eego ama la daabaco. Natiijooyinkaan wali dib u eegis kuma aysan sameynin bulshada guud ee cilmiga, laakiin haddii ay cadeeyaan inay sax yihiin, waxay kicin karaan tijaabooyinka aadanaha si loo baaro in isku darka CBD iyo terpenes ay run ahaantii u shaqeeyaan bukaanada qaba Covid-19- cilladaha duufaanka ee cytokine.
Ilo ay ka mid yihiin Forbes (EN), TheFreshToast (EN)
CBDsaliid cbdtaajFayras CoronaCovid-19caafimaadkaIsraa'iilcilmi baaristerpenes
Dukaanka Xashiishka ee gobolka Ontario ayaa iibiya waxyaabaha la cuni karo saacado gudahood
Ganacsadaha kaliya ee khadka tooska ah ku iibiya xashiishadda Ontaria ee iibiya xaddiga buuxa saacado yar gudahood si ...
Warshadaha xashiishadda ayaa sugaya oggolaanshaha FDA ee alaabada CBD
Cannabis waa sharci darro gudaha Mareykanka marka loo eego sharciga federaalka. Si kastaba ha noqotee, alaabada CBD ama cannabidiol waa sharci ...